MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYAHA PEEK-A-POM - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha Peek-A-Pom
Pomeranian / Pekingese eeyaha isku dhafan ee isku dhafan
Poochie Peek-A-Pom (badh Pekingese badh Pomeranian) markay tahay 6 sano
Peek-A-Pom ma ahan eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Pomeranian iyo Pekingese . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda nooc isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% nadiif ah ilaa 50% saafi ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
Naadiga Isku-dhafka Canine ee Mareykanka = Pominese
Diiwaan Geliyaha Nakhshadeeye = Pominese
Naadiga Naqshadeeyaha Eeyaha Kaynta = Pominese
Diiwaanka Canine-ka Caalamiga ah ee naqshadeeye®= Peekapom
Waxaan sawiradan ka qaaday mid ka mid ah caruurteydii yar yareyd ee Peke-A-Pom markii uu jiray 9 todobaad. Noocani waa mid aad u macaan oo leh jaakad aan la rumaysan karin oo waji leh, weji fidsan iyo mid gaaban oo jidh leh. Arday aad u yaryar - oo ka yar hal rodol markay jiraan 9 toddobaad. '
Peke-A-Pom eey yar oo 9 toddobaad jir ah (Pomeranian / Pekingese mix mix dog)
'Kani waa Vicki. Waxay tahay sanad jir bun / madow ah Peek-A-Pom. Waxaan ka helay iyada markay toddobaadyo uun jirtay, waa eey aad u yaab badan. Waxay jeceshahay kalgacalka iyo orodka iyada oo aan lahayn ujeedo gaar ah, laakiin ma ahan inay soo qaadato sidaas. Waxay jeceshahay u orodka shisheeyaha inay u ciyaarto wax kasta oo da 'ah. Way jahwareersan tahay markay wax ku faraxsan tahay. Waxay doorbidi lahayd inay hareereeyaan banii'aadamka halkii ey ka weynaan laheyd ama ka weynaan lahayd. Waxay neceb tahay in looga tago gurigeeda kaligeed sida eey kale. Iyadu waa mid gaar ah oo boos gaar ah ayay ku leedahay qalbigayga. '
'Ellie the Peek-a-pom or' Pominese '- hooyadeed waxay ahayd Pekingese saafi ah, aabe waa reer Pomeranian saafi ah.'
'Tani waa Ellie. Iyadu waa 2-sano jir bunni / madow Peek-A-Pom ama 'Pominese.' Hooyadeed waxay ahayd Pekingese saafi ah, aabe reer Pomeranian saafi ah. Ninkayga iyo aniga waxaan helnay Ellie markii ay 8 toddobaad jirtay. Ellie miisaankeedu waa 8 rodol. Hooyadeed waxay ahayd 13 rodol, aabbaha 6 rodol. Iyadu waa eey cajiib ah, shaqsiyad weyn. Way yara adkayd in la tababaro. Laakiin markii ay heshay way 'heshay'. Aad bay u tahay a dhabta eyga . Waxay ka doorbidi laheyd dadkeeda inta eyda kale. Waxay socdaa oo wuxuu ku raaxeeyaa raacitaanka magaalada hoose ee dukaamada xayawaanka maalmaha fasaxa ah. Waxay jeceshahay alaabta lagu ciyaaro ee qaylada, laakiin kuma weyna soo-qaadashada ama cayaaraha. Aad ayey u deggan tahay gudaha. Meel ayey ka qaadan doontaa oo seexan doontaa saacado. Ellie waa mid aad u fudud in la barto tabaha. Way rogrogmaysaa oo iyada oo dhan sameeyaa amarrada aasaasiga ah . Waa ay adagtahay in guriga lajebiyo eeyo yaryar aniguna waxaan aaminsanahay tababarka sanduuqa ! Ellie hadda waxay u maleyneysaa sanduuqeeda inay tahay 'sariirteeda' yar waxayna u galaysaa habeen walba waqti isku mid ah. Iyadu waa eey cajiib ah, ma codsan karno wax intaas ka badan. :) '
Mabel the Peek-A-Pom (Pomeranian / Pekingese mix breed dog) at 4 sano jir
adhijirka jarmalka rhodesian ridgeback puppy puppy
Toby the Peek-A-Pom at 3 sano jir
Toby hiwaayadda Peek-A-Pom waa caajis. Mulkiilihiisa oo sii hadlaya ayaa yidhi, 'Waxaan u maleynayaa inuu yahay eeyga ugu quruxda badan ee aan abid arko! Wuxuu leeyahay shaqsiyad qosol leh, waana eey weyn ... '
'Inkasta oo Toby uusan runtii ka helin inuu u labisto sidii cawil oo kale waqtiga Kirismaska!'
sawirada eyga buur bernese
Maverick Pete Mitchell oo ah Pomeranian / Pekingese mix (Peek-A-Pom, sidoo kale loo yaqaan Pominese)
Eeg tusaalooyin badan oo ah Peek-A-Pom
Sawirada Peek-A-Pom 1
chihuahua Ghadafi dari isku darka pinscher
Jack collie xadka size isku darka Russell
isku darka bulldog la Pit bull
saint bernard border collie mix puppy ee iibka ah